mpiasa any Zimbaboe roa izay voatifitry ny tompon'andraikitra shinoa iray - TELES RELAY
mpiasa an-trano roa avy any Zimbaboe no voatifitry ny tompon'andraikitra shinoa iray
By bryanekobe On Jona 30, 2020
Ny tifitra ataon'ny mpiasa roa any Zimbabwe ataon'ny boss sinoa dia mampiseho ny fanararaotana "mijaly sy miely" izay atrehan'ny olona amin'ny asa fitrandrahana sinoa, hoy ny Zokiolona momba ny lalàna miaro ny tontolo iainana (ZELA).
Tao anatin'ny afidavitin'ny fitsarana, nilaza i Zhang Xuen fa nahafaty mpiasa dimy in-droa ary naharatrana olona iray tao amin'ny toeram-pitrandrahana iray izay nitondrany tany amin'ny faritanin'i Gweru any Zimbabwe, tamin'ny fifanolanana tamin'ny mpiasa mihoatra ny karamany.
Tamin'ny taona 1985, nandresy an'i Shina, India, Ghana, Maroc i Kamerona…
Nizeria: maty roa maty voatifitra tamin'ny helikoptera an'ny Firenena ...
Malcolm X: fiverenana amin'ny ain'ny mpitondra ny hadilana amin'ny hasina…
Zhang dia voampanga tamin'ny famonoana andrana, hoy i Paul Nyathi, mpitondra tenin'ny polisy any Zimbabwe.
araka ny Tatitry ny fampahalalam-baovao eo an-toerana , Tsy niangavy i Zhang satria tsy nisy ny mpandika ny fahazoan-dàlana amin'ny fitsarana. Hijanona ho fitazonana izy mandra-pahatongan'ny 7 Jolay farafaharatsiny, hoy ny tatitra.
Tamin'ny alahady maraina no nitrangan'ilay fitifirana rehefa nifanehitra tamin'i Zhang ny mpitrandraka Kenneth Tachiona taorian'ny voalaza fa nandà ny handoa ny karamany tamin'ny dolara amerikana, araka ny nifanarahana, hoy ny fitantaran'i affidavit.
Raha ny filazan'ny affidavit dia natotr'i Tachiona i Zhang, izay avy eo nisintona ny basiny, ary nitifitra intelo teo amin'ny valahany havanana ary indroa teo amin'ny ankavia ny mpiasa.
Nilaza ny polisy fa nitifitra iray hafa i Zhang tamin'ny mpiasa ary ny iray tamin'ireo bala dia nikasika ny vavan'ny mpiasa iray. Ny mpiasa naratra dia tsaboina ao amin'ny hopitaly tsy miankina.
Lahatsary izay nambaran'ny maro tamin'io tranga io nivezivezy tao amin'ny media sosialy tao Zimbabwe, niteraka fahatezerana ampahibemaso sy antso avy amin'ny mpiambina teo an-toerana ho famerenana indray ny asa fitrandrahana sinoa ao amin'ny firenena.
Ny masoivoho sinoa any Zimbabwe dia namariparitra ny fitifirana ho tranga mitokana ary nilaza izy fa manohana ny fanadihadiana misokatra sy mangarahara ataon'ny manampahefana eo an-toerana.
"Mety tsy harovana ny hetsika tsy ara-dalàna rehetra sy izay mandika ny lalàna. Manana finamanana sy fiaraha-miasa efa ela i Chine sy Zimbabwe. Miantso ny antoko rehetra miaro ny fialonana sy ny fikarakarana azy izahay ”, ny masoivoho sinoa dia nilaza tao anaty Twitter tao.
Nilaza tamin'ny CNN ny minisitry ny raharaham-bahiny shinoa, "Amin'ny ankapobeny, ny orinasa Shinoa any Zimbabwe dia efa niasa ny orin'izy ireo mifanaraka amin'ny lalàna sy fitsipika ao an-toerana ary nahavita nandray anjara tsara tamin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy tao Zimbabwe.
"Manaja ny fikarakarana ny raharaha an'i Zimbabwe izahay araka ny lalàna, saingy mandritra izany fotoana izany dia manantena i Zimbabwe hiaro ny filaminana sy ny zo ara-dalàna sy tombontsoan'ny teratany sinoa. Misy ny fisakaiza nentim-paharazana misy eo amin'ny firenena roa tonta ary mino izahay fa samy hifanaraka tsara amin'ny raharaha ity raharaha ity. "
I Shina no mpamatsy vola lehibe indrindra any Zimbabwe izay misy tombontsoa lehibe amin'ny sehatry ny fitrandrahana ny firenena
Tamin'ny taona lasa, nanao sonia ny a ny orinasa shinoa Tsignchan Varotra $ 2 miliara miaraka amin'ny minisitry ny harena ankibon'ny tany Zimbabweana haka trondro, vy, vy ary arina, loharano tena ilaina ho an'i Sina.
Araka ny tatitra tamin'ny taona 2016 avy amin'ny Brookings Institution, di Sinoa farafahakeliny 10000 any Zimbabwe ary miasa betsaka amin'ny indostrian'ny fitrandrahana, ny fifandraisan-davitra ary ny fananganana orinasa mandritra ny fifanarahana.
Ny fisian'izy ireo teto amin'ny firenena indraindray dia mifanohitra ihany.
Samy voampanga ny toeram-pitrandrahana sinoa ao amin'ny firenena na ny fitrandrahana ny fanjakana fanitsakitsahana ny zon'olombelona ary ny fepetra fiarovana ho an'ny mpiasa.
Tamin'ny volana febroary, andiana mpitrandraka maromaro ao amin'ny faritany Matabeleland South manontany fitsarana laboratoara hanohitra ny fanesoran'izy ireo ilay mpampiasa shinoa azy.
Mpiasa amin'ny asa fitrandrahana sinoa hafa ao amin'ny faritany tamin'ny volana aprily lasa teo mimenomenona raha ao ambaniny - karama sy miasa tsy misy akanjo miaro.
ZELA dia eo am-pikarohana tranga maromaro momba ny mpitrandraka sinoa mandà tsy handoa karama na manome akanjo fiarovana ho an'ny mpiasa ao aminy, indrindra mandritra ny valanaretina Covid-19, hoy ny tale lefitra Shamiso Mutisi
“Lasa modely sy rafitra io. Manana tranga izay ampanaovina zaza tsy ampy taona, voadaroka ary manavakavaka ny zaza tsy ampy taona Shinoa », hoy i Mutisi.
Taminà fanambarana iray navotsotra ny alarobia, nilaza i ZELA fa ny mponin'ny sasany amin'ny vanja Sinoa dia matetika miasa ao "mampidi-doza, masiaka ary tandindomin-doza" , raha tsy nandoa vola ho an'ny fotoanany izy ireo.
Ny fitifirana ny alahady dia antony iray tokony hamerenan'ny governemanta ny andraikitra ara-politika sy ara-toekarena ao Shina, hoy ny vondrona.
"Any amin'ny faritra maro eto Afrika, anisan'izany i Zimbabwe, mpamatsy vola Shinoa amin'ny sehatry ny harena ankibon'ny tany dia naneho tantara momba ny tsy fandriampahalemana, fahasalamana, tontolo iainana, asa ary ny fenitry ny zon'olombelona", dia mampiseho ny famoahana an-gazety.
Ny CNN dia nifandray tamin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny sinoa mba hanomezana heviny.
Faty 24 hita tany amin'ny toeram-pitrandrahana volamena iray tondraka any Zimbabwe
Ny vondrom-piarahamonina shinoa ao Gweru dia nanalavitra ny zava-nitranga tato ho ato ary nampanantena fa handoa ny volavolan-pitsaboana an'ireo mpiasa naratra ary manohana ny fianakaviany amin'ny fiatrehana ilay olana.
Ny fiaraha-monina shinoa dia nilaza tamina fanambarana iray fa tsy hita taratra ny fihetsik'ireo mpikambana ao ny raharaha fa nanakarama ny orinasa izy ireo hanonerana ny mpiasa.
"Manantena hatrany am-pahatsorana izahay fa tsy ho voarebirebina amin'ity raharaha mitokana ity ny fisakaizantsika sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa sy ny olon-droa, izay tsy taratry ny fihetsik'ity rehetra ity ho vondron'olona shinoa," hoy ny fanambarana.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://edition.cnn.com/2020/06/27/africa/zimbabwe-mine-shooting-intl/index.html
Fivarotana zazakely an-tserasera an-tsary ao amin'ny telo lahy voasambotra
Ity no antony ilana an'izao tontolo izao mikraoba hiasa
Tamin'ny taona 1985, nandresy an'i Shina, India, Ghana, Maroc ary ny morontsiraka i Kamerona.
Nizeria: roa no maty nitifitra tamin'ny helikoptera an'ny Firenena Mikambana
Malcolm X: fiverenanao ny ain'ny mpitondra ny hadianana amin'ny lanjan'ny kardinaly
Kolombia: ny fanagadrana dia mitarika herisetra amin'ny vehivavy